ကြောင်ရီးအိမ်ကို CIA မှရှာတွေ့ဘီ…. ကယ်ဂျဘာာာာာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ကြောင်ရီးအိမ်ကို CIA မှရှာတွေ့ဘီ…. ကယ်ဂျဘာာာာာ
ကြောင်ရီးအိမ်ကို CIA မှရှာတွေ့ဘီ…. ကယ်ဂျဘာာာာာ
Posted by Wow on Sep 30, 2013 in My Dear Diary | 28 comments
2008 ခုနှစ်လောက်ထဲက ကန်ထရိုက်တိုက်တွေ ဆောက်တော့ အဲဒီ့နားမှာပဲ အိမ်ငှားနေရင်းက ကိုယ်တိုင်လဲ သားသမီးမရှိတော့ နေ့စေ့လစေ့နဲ့ စနိုးဝှိုက်ဆိုတဲ့ကြောင်မကြီးကို စောင့်ရှောက်ထားရင်းကနေ တဖြည်းဖြည်း ကြောင်ဦးရေတိုးပွားလာပြီး အခု ကြောင်အကောင်ရေ ၃၀ ကျော်ကို စောင့်ရှောက်ကျွေးမွေးထားပါတယ်။
တစ်နေ့တစ်နေ့ ကြောင်စာဖိုးက ၅၀၀၀ လောက်ကုန်တယ်လို့သိရပါတယ်။ မနက်ပိုင်းကို ငါးအစိမ်း ၁ ပိသာ ၀ယ်ကျွေးပီး.. . ညနေပိုင်းမှ ထမင်းနဲ့ ငါး၊ ကြက်ခေါင်းတွေနဲ့ ပြုတ်ကျွေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။
စောင့်ရှောက်ထားတဲ့ အမကြီးက အဲဒီ့နား ၇လွှာမှာနေပြီး၊ စီးပွားရေးက ယောက်ကျားလေးဆောင်ဖွင့်၊ အိမ်ခြံ မြေပွဲစားလုပ်ပါတယ်။ ကုန်ကျတာကို မငြိုငြင်ပေမဲ့ တိုက်ရှေ့ချောင်းဘေးနားလေးမှာ ကင်းတဲလေးလိုထိုးပြီး ကြောင်အကောင် ၃၀ ကျော်ထားတဲ့ အခါ ရပ်ကွက်ထဲက တစ်ချို့တစ်လေက ကြောင်သေးစော်နံတယ် ဆိုပြီး ငြိုငြင်တာတွေလဲရှိတာကြောင့် လက်ခံမဲ့နေရာများရှိရင် ပို့ပေးချင်ကြောင်းလဲပြောပါတယ်။
ကြောင်တစ်ကောင်ကားတိုက်သွားလို့ ဆိုပြီး အဲဒီ့နားမှာ အဖွားတစ်ယောက်ကပါ စောင့်ရင်းဆင်းအိပ်နေတာ တွေ့ရတော့ ကျမ်းမာရေးအတွက်မကောင်းဘူးလို့ ပြောပြချင်ပေမဲ့… သံယောဇဉ်ဆိုတော့လဲ ပြောရလို့.. သက်ပြင်းသာ အသာချခဲ့ရပါတယ်….
အခုလဲ အင်တာနက်မှာထဲ့မှာပါ လို့ခွင့်တောင်းခဲ့တော့ မြန်မာဂျာနယ်မှာတော့ မထဲ့ပါနဲ့ စည်ပင်က လာဖျက်သွားရင် သူ့ကြောင်လေးတွေနေစရာမရှိမှာစိုးလို့ပါတဲ့…..
တစ်ခါ ပုလဲဘက်က ဘုန်းကြီးတစ်ပါးက လက်ခံမယ်ဆိုလို့ ဘုန်းကြီးကျောင်းလိုက်သွားတော့ ရေတွေလျှံနေလို့… ပို့လို့မရသေးဘူးပြောပါတယ်…..
အဲဒီ့လမ်းထဲမှာပဲ ဆွမ်းပတ်တွေချက်လှူနေတာလဲ တွေ့ရပါတယ်….
ဒီကြောင် အကောင် ၃၀ ကိုလက်ခံနိုင်မယ့်နေရာလေးများရှိရှင်ပြောကြပါဦး…..
နာ သာ ရှိလို့ကတော့ သွားသယ်မှာ။
အရင်က အိမ်မှာ အနည်းဆုံး ၇ ကောင်ကနေ ၁၆ ကောင်ထိမွေးဖူးတယ်။
ဒက်ဒီပြောင်းလေရာ အရပ် နာတို့ သားအမိ ကြောင်ခြင်းတွေပိုက်ပြီးလိုက်ရတာ။
နာတို့နား ဆို ရထားပေါ် လူမကပ်ရဲဘူးးးးးး
ကြောင်သေးနံ့ နံလို့။ လူရှိန်တာပေါ့အေ။
ချစ်မိရင် ဒဏ်ခံရစမြဲမို့ ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲ ကိုယ်ချင်းစာပါရဲ့။
ဟုတ်ပါ့ဆွိရယ်… ကျောင်းတက်တုံးကလဲ ကိုယ်တောင် အငတ်ခံပြီး ကြောင်ကျွေးဘူးတာ ပြန်သတိရသပေါ့… ခုများတော့ သံယောဇဉ်တွေ ဝေါင်ဝေါင်ရွှေးးးး :hee:
ကြောင်ကြီးမှုာ နေစရာဒွေ ပုံလို့…. ကြေးမုံဂျီးအိမ်သွားမလား ခရစ်စတယ်လေးဆီနားမလား… အကြောက်ဝူး…။ ဦးမျိုးသာမီးလေးတွေလည်း ရှိဒယ်… နောက်ဆုံး ဘယ်သူမှ မကယ်ရင် အယာတိုလာ ခိုမ်မေနီဂို ယောက္ခမတော်ပီး အိမ်ဦးခန်းတက်နေမည်….။ ဘာသာပြောင်းဖို့ ဝံအလေးဘူး…။
ဟာဂျာ..အဲ့လောက်များကြီး ဘာလို့မွေးသတုန်းမသိ…ကင်စားလိုက် ပြီးရော..အဟီး
ကြန်းးးးး ရက်စက်လှချည်လား…. ယုတ်မာလှချည်လား… ဒါ့ဂျောင့် ဟိုခေးမက အသေဆော်တာ…
အဲ့လာရုပ်အရမ်းချောနေလို့ ..သ၀န်တိုလို့ဂျ…ဘာမှလဲမသိပဲနဲ့ …အာဟိ
အယ် သိတယ် မမဝေါင်း။ တစ်ရက်သား အဲဒီအိမ်နားကဖြတ်တော့ ကြောင်တွေအများကြီးကိုတွေ့တော့ တအံ့တသြပြူးကြည့်ခဲ့သေးတယ်။ တိုက်ကြီးမြင်မှ မှတ်မိတွားဒါ။ အကောင် ၃၀ ကျော်ဆိုတော့ မနည်းဘူးပဲ။ အိုဘယ့် သံယောဇဉ်
အောင်မယ်လေး ချစ်စရာလေးတွေ။ ခက်တာကဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကလဲလက်မခံတော့ဘူး။ အမလဲ အိမ်က ကလေးတွေကို ပို့ဖို့လိုက်လျှောက်တာမယ် တကျောင်းမှလက်မခံဘူးရယ်။ နောက်တော့မှ တကယ်မွေးချင်တဲ့သူတွေကိုအိမ်တိုင်ယာရောက်လိုက်ပို့ပေးရဖူးတယ်။ အခုကအကောင် ၃၀ ဆိုတော့ တော်တော်တော့ခက်မယ်။ အစာဖိုးလှုဆိုလှုချင်ပါတယ်။
တိရိစ္ဆာန်တွေကို သနားလို့ ဆိုပြီး မျိုးပွားခွင့်ပေးလိုက်တာ ( ကူညီပေးလိုက်တာ ) က
အတော်ဆိုးတာဘဲ ( အပြစ်ပြောတဟုတ်ဘူးနော )
အဲ့သည်သတ္တဝါလေးတေကို တစ်နေ့ဒဂေါင် ချက်စား ( အရဂါးနောက်တာ )
စားလို့ဝရင်တော့ မေထုန်မှီဝဲမယ် မေထုန်မှီဝဲကြရင် နောက်ထပ်မျိုးပွားလာဦးမယ်
ဒင်းတို့ကို ချက်စာမလား မျိုးပွားမှု့ရပ်အောင်လုပ်မလား နေစရာရှာပေးမလား
ကြောင်အမတွေကိုတော့ အခု ဒက်ပိုထိုးပေးနေတယ်ပြောဒယ်ကပုရဲ့…..
အိမ်မှာ ကြောင် ဂရုစိုက်တတ်တဲ့သူ( ချစ်တတ်သူ မဟုတ်) ရှိတော့ အချိန်မှန်ကျွေး လိုအပ်တာလုပ်ပေး
ဆောင်းတွင်းဆို ပန်ကန်စင် အဟောင်းကို ကတ်ထူ စက္ကူ ခင်း ကာ လုပ်ပေးထားတော့ သုံးထပ်တိုက်လေး လိုဖြစ်နေတာပေါ်အိပ်ကြနဲ့ (၇)ကောင် တောင် ရှိနေပြီ
ကြောင်မကြီးကလဲ တစ်ခါပေါက် (၃) ကောင်နှုန်းနဲ့ ခဏခဏ ပဲ
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ထဲကပေါက်ထားတဲ့ ကြောင်လေး သုံးကောင် ရက်ခြားပြီး အကုန်သေသွားတော့
သူ့ သား သမီးတွေ လိုက်ရှာနေတဲ့ ကြောင် မကြီးရဲ့ တညောင်ညောင် အော်သံ ကြားနေရတာ စိတ်မကောင်းစရာပဲ
သံယောဇဉ်တွေဆိုတာ စောစောစီးစီးကတည်းက မမွေးတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
ခုတော့ ခက်ပေါ့ မမဝေါင်းရေ။
ဟုတ်ပ အန်ကယ်ဒုံရယ်… ကြောင်ရီးကတော့ သူ့အမျိုးတွေ မသိခြင်ထောင်ထောင်နေပေမဲ့ အိုက်အမကြီးခညာ အကောင် ၃၀ ကျော်နဲ့ ကျန်ခဲ့ပေါ့…
ပဂျွန်တွေမျိုးတုံးရင်တော့ ဗုံကလေး ကြောင်စာလာပို့ပေးရမယ်နော်…
အသိတစ်ယောက်အိမ်ကိစ္စရှိလို့သွားတော့..အိမ်က ခြောက်လွှာမှာ..လှေကားကကျဉ်း.. ကြောင်မွေးထားတဲ့အခန်းတွေကလည်းစည်းကမ်းမရှိ..နေသူတွေလည်းစည်းမရှိထင်ပါတယ်.. အနံ့အသက်ကမခံနိုင်သလို.. ကွမ်းတံတွေးတွေ ကလည်းမြင်မကောင်း.. တော်တော်စိတ်ပျက်သွားမိတယ်.. အဲလိုတိုက်တွေမှာနေသူတွေက စည်းကမ်းတကျမလုပ်နိုင်ရင်တော့မမွေးသင့်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်.. အခုကတော့သီးသန့်ကင်းတဲထဲမွေးထားတယ်ဆိုတော့ အထူးအဆန်းပဲ.. :))
ခွစ်ရယ်.. အကောင် ၃၀ ကို တိုက်ခန်းထဲမှာသာစို စင်းဇားသာကျိတော့….
ကင်းတဲလေးနဲ့မို့တော်သေး… ရပ်ကွက်ကလဲ ဘာမှ သိပ်မပြောလို့သာပေါ့… :harr:
လှည်းတမ်း ငါးလမ်းထဲမှာလေ အသဲလေး…
ပြန်စဉ်းဇား အုန်းမယ် ဂျီးဒေါ်ရယ်..။
ဟင်းနော်.. အိုက်တင်ခံပီး ဈေးတက်တောင်းဖို့မစင်းဇားနဲ့ ဘရန်းဒွေဆင်မဲ့ ဆွိနဲ့ မင်ဂါဆောင်လိုက်မာ…
လူဂျီးကိုက တိုးတောင်းဖို့ပဲ စဉ်းစားနေ။
ဒီကလို မားကက်တင်း/ပလိုမိုးချင်းးး/ဆွဲဆောင် မှု လည်း ရှိပဲနဲ့။
ငါး လမ်းထဲဖြတ်ရင် တွေ့ပါ့ဗျာ..အဲဒီကြောင်လေးတွေ..
တစ်နေ့တစ်နေ့ ကြောင်စာဖိုးက ၅၀၀၀ လောက်ကုန်တယ်လို့သိရပါတယ်။
မကောင်းကျောင်းပို့ လုပ်ပြီး တရားရှာနေတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေတော့ ဒုက္ခမပေးကြပါနဲ့ဗျာ…
တရုတ်ပြည်ပို့ရင် တရုတ်က သတ်ပီး ညန်မာကို ဘာဘီကျူး အိတ်စပို့ပြန်လုပ်မာ လေးမိုက်ရဲ့ … ကြောင်ရီး တရုတ်ပြီ ခြေအူးမလှဲ့ရဲတာကျိပါလား